म विवाहित युवती हुँ ,’ श्रीमानले मलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्न ’ - IAUA
म विवाहित युवती हुँ ,’ श्रीमानले मलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्न ’
ramkrishna November 29, 2016	’ श्रीमानले मलाई सन्तुष्ट बनाउन सक्नुहुन्न ’म विवाहित युवती हुँ
म विवाहित युवती हुँ । मेरो श्रीमानको उमेर ३७ वर्ष र मेरो उमेर २३ वर्ष छ । मेरो यौन जीवन सन्तोषजनक छैन । यो सधैं नै पीडादायी हुने गरेको छ, त्यसैले म यौनसम्पर्कबाट टाढा भाग्छु, जसका कारण मेरो श्रीमान् रिसाउनुहुन्छ । ममा यौनसम्बन्धी कुनै रोग पनि छैन । किन यौनसम्पर्क पीडादायी भएको होला ?
सामान्यतस् यौनसम्पर्क सुखमय हुनुपर्ने हो र यसमा मानिसले उत्कृष्ट सुख प्राप्त गर्ने भएकाले यसलाई चरमसुख पनि भनिन्छ, तर सबैमा त्यस्तो हुँदैन । कतिपय कारणले यौनसम्पर्क पीडादायी हुनपुग्छ । पीडादायक तथा अप्ठयारो यौनसम्पर्कलाई चिकित्सकीय भाषामा म्थकउबचभगलष्ब भनिन्छ ।
अन्य शारीरिक कारणहरूमा योनिद्वार वा भगक्षेत्रको छालाको समस्या हुन सक्छ । त्यसैगरी भगांकुरको संक्रमण वा शोथमा पनि यौनसम्पर्क पीडायुक्त हुन सक्छ । योनिद्वार वा द्यबचतजयष्लिुक न्बिलम को संक्रमण पनि पीडाको कारण हुन सक्छ । मूत्रनली वा मलद्वारमा कुनै समस्या छ भने पनि यौनसम्पर्क पीडादायक हुन सक्छ । योनिको संक्रमण वा कुनै रसायनका कारण शोथ भएको छ भने पनि पीडा हुने नै भयो । त्यसैगरी पाठेघरको मुख वा पाठेघरको संक्रमण वा अन्य खराबीमा पनि पीडा हुनसक्छ । तपार्इंले आफूमा कुनै यौन रोग नभएको बताउनुभएको छ तर एकपल्ट स्त्रीरोग विशेषज्ञसँग सम्पर्क राखी रोगको निदान गर्नु बेस होला ।
अर्को महत्वपूर्ण कारण योनिको मांसपेशी कडा हुनु हो । यस किसिमको अवस्थालाई ख्बनष्लष्कmगक भनिन्छ । धेरैजसो अवस्थामा भय अर्थात् डर नै यसको कारण हुन्छ । कसरी मानसिक समस्याले यौनसम्पर्कमा पीडाको समस्या निम्त्याउँछ, यकिनका साथ भन्न गाह्रो छ, तर पहिलो यौनसम्पर्क शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पीडादायक भएको स्थितिमा त्यसको असर लामो समयसम्म रहन सक्छ । तपाईंहरूको पहिलो यौनसम्पर्कको अनुभव कस्तो रह्यो, तपाईंले केही लेख्नुभएको छैन । त्यसैले तपाईंमा कुनै डर वा भय छ भने पत्ता लगाई त्यसलाई हटाउनु आवश्यक छ ।
योनि सुख्खा भए यौनसम्पर्क नै पीडादायक बन्छ । आक्कल–झुक्कल योनि सुख्खा हुनु त्यति ठूलो समस्या नहुन सक्छ, तर निरन्तर रूपमा त्यस्तो भए यो चासो विषय बन्न पुग्छ । योनिरस नआए यौनसम्पर्क गर्न नै असजिलो हुन्छ । योनिरस पर्याप्त मात्रामा नभै यौनसम्पर्क गरेका कारणले यस्तो भएको हो र पर्याप्त मात्रामा योनिरस निस्कन्छ जस्तो लाग्दैन भने अन्य चिल्लो पदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि भ्यासलिन वा त्यस्तै कुनै तेल युक्त चिल्लो पदार्थ उपयोगी हुन्छ, तर त्यसले हाम्रो शरीरमा भएका सूक्ष्म छिद्रलाई बन्द गर्ने सम्भावना भएकाले त्यसको तुलनामा पानीमा घुल्ने चिल्लो पदार्थ ९प्(थ् वभििथ० प्रयोग गर्नु बढी उपयुक्त हुन सक्छ । कतिपयले थूकलाई राम्रो विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका हुन्छन् ।
कसरी एक–अर्कालाई सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । यौन सुख प्राप्तिका लागि योनि–लिङ्ग यौन सम्पर्कलाई सहज बनाउनेदेखि मुख मैथुन वा अन्य यौन क्रियाकलापका बारेमा छलफल गरी सहमतिमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । साप्ताहिकबाट
डा राजेन्द्र भद्रा ,
Previous Previous post: कसरी बढाउन सकिन्छ स्मरण शक्ति ?
Next Next post: पुरुषका लागि बनाइएका ५ कुरा जुन अहिले महिलाले मात्र लगाउँछन्